Degso Zoom loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (15.00 MB)
Zoom waa codsi Windows ah oo aad ugu biiri karto wada sheekaysiga fiidiyowga qaab fudud, kaasoo guud ahaan la isticmaalo inta lagu jiro waxbarashada masaafada oo leh astaamo waxtar leh oo bixiya taageerada luuqadda Turkiga.
Sidee loo sameeyaa wicitaan fiidiyoow ah?
Kadib markaan soo degsano barnaamijka Zoom, waxaan ku galnaa adigoo laba-gujinaya barnaamijka. Shaashadda soo muuqata, waxaan ku galnaa magacayaga adeegsashada iyo lambarka sirta ah, haddii ay jiraan. Haddii kale, waxaan abuureynaa isticmaale.
Ka dib markii aan soo galnay, waxaan gujineynaa Kulamo Cusub oo leh Saxeexa Kaamirada Orange ee shaashadda soo muuqata. Adiga oo gujinaya halkan, xulashooyinka qaarkood ayaa ka soo muuqan doona hoosta. Halkan waxaan ku bilaabaynaa wadahadalka fiidiyowga adigoo gujinaya Bilowga xulashada fiidiyowga.
Waxaa ku yaal badhanka Martiqaad shaashada hoosteeda meesha aan isku aragno. Ka dib markaad gujiso badhan, xulashooyinka qolkaaga ayaa muuqda. Haddii aad rabto inaad ku wadaagto xiriirka e-maylka, waxaan riixnaa badhamada shaashadda dhexda. Haddii aan rabno inaan si toos ah cinwaan ugu dirno, waxaan helnaa cinwaanka loo baahan yahay adigoo riixaya xulashooyinka nuqulka URL ee shaashadda hoose.
Kadib waxaan cinwaankan u diraynaa qofka kaqaybqaadan doona wada hadalka anaguna waxaan bilaabaynaa sheekada.
Sideed ugu biiri kartaa wada hadalka fiidiyow ee loo yaqaan Zoom video chat?
Kaqeybgalka wadahadalka fiidiyow ee laga furay barnaamijka Zoom waa wax fudud. Ugu horreyntii, waa inaad haysataa cinwaanka isku xirka qolka. Qofka qolka furayaa wuxuu u baahan yahay inuu kuu soo diro cinwaan xiriiriya.
Markaa waxaad ku biiri kartaa wada hadalka si fudud adoo dhahaya Ku Soo Biir Kulan. Haddii qolku sir yahay, waa inaad gashaa lambarka sirta ah ka dib markaad riixdo badhanka Ku Biir Kulan.
Barnaamijka Wicitaanka fiidiyowga, oo aad u isticmaali karto bilaash, wuxuu bixiyaa faahfaahin badan. Waxaad ka eegi kartaa gunooyinka xubinnimada ee la bixiyo ee boggan.
Cabirka Faylka: 15.00 MB